Formwork Solutions Iyo yemazuva ano kongiri inodira chivakwa formwork system ndeyechinguvana modhi dhizaini yekuona kuti kongiri yadururwa mukongiri mamiriro maererano nezvinodiwa pakuvaka dhizaini. Inofanira kutakura yakatwasuka mutoro uye ve ...
Solutions (Scaffolding Solutions) Scaffolding zvinoreva zvitsigiso zvakasiyana zvakavakirwa panzvimbo yekuvakira vashandi kuti vashande uye vagadzirise zvifambiso zvinomira zvakamira zvakanaka. Kunyanya kune vekuvaka kuti vashande kumusoro uye pasi kana kuchengetedza vekunze ...
Otomatiki Kukwira Formwork Solutions
Otomatiki kukwira formwork Iyo yekukwira furemu inokodzera iyo huru muviri wechivakwa pamusoro pemamita makumi mana nemashanu, uye inogona kuiswa kune mukuru mutumbi wezvimiro zvakasiyana. Iyo inotora simbi-yesimbi senge yakazara, ine yakasanganiswa michina, yakaderera co ...
Kuchengetedza Cold Kamuri Solutions
Kuchengetedza Cold Kamuri Kuchengetera Cold Kamuri Solution chinhu chitsva chechigadzirwa cheSampmax Kuvaka, nekuda kwemafekitori edu mitsara mabhenefiti nekusimudzira tekinoroji, muna 2020 isu tinogadzira fekitori nyowani yerudzi urwu rwemhinduro. Iyo yemhepo-yakadzora unit ndiyo yekutanga ...